[Ingxenye Yokuqala] i-LMDE ekujuleni: Ukufaka | Kusuka kuLinux
[Ingxenye yokuqala] i-LMDE ngokujula: Ukufaka
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukusatshalaliswa, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ingxenye yokuqala yomhlahlandlela wokuthi ungafaka kanjani, ulungiselele futhi wenze ngendlela oyifisayo I-LMDE. Kulokhu sizobona inqubo yokufaka nokuvuselela isinyathelo ngesinyathelo.
0.1 Izinga Lolwazi: Ulwazi Lokuqala / Ukufakwa
1 Kungani usebenzisa i-LMDE?
2 Ukufaka i-LMDE.
Izinga Lolwazi: Ulwazi lokuqala / lokufaka
I-LinuxMint isibe ngesinye sezabelo ezidume kakhulu ze I-GNU / Linux, futhi kungokwesine Isistimu yokusebenza esetshenziswa kakhulu emhlabeni, iba ngaphansi kuphela I-Windows Windows, Mac OS y Ubuntu.
Kusukela ngonyaka odlule, kuya ku- mint umndeni wajoyinwa okuhlukile okubizwa ngokuthi I-LMDE (I-Linux Mint Debian Edition) ngenhloso yokunikeza uhlelo oluhle kodwa ngasikhathi sinye, ngokushesha, ngokuzinzile futhi okulingisa uhlobo lwe Ukukhishwa kwe-Rolling.
Kuze kube namuhla, isetshenziswa yingxenye enkulu ye- Umphakathi weLinuxMint futhi kwengezwe intuthuko ebalulekile, esizochaza ngayo ezindabeni ezizayo.
Kungani usebenzisa i-LMDE?
Isivinini, ukuzinza, ukuphepha, izichasiso ezivame ukuhlotshaniswa nazo I-Debian GNU / Linux, noma kunjalo, ukusebenza kalula akwenzi. Wonke umsebenzisi we Debian Uyazi ukuthi uma sesilufakile uhlelo, kuzofanele sichithe isikhashana ngemuva kwalokho sizama ukululungiselela, ukufaka amaphakheji, ukumisa kancane lapha nokuncane lapho.
Uma usuvele ungumsebenzisi onolwazi ongamele inkinga enkulu kakhulu, kepha esimweni sabaqalayo, izinto ziyashintsha. Nge I-LMDE sigcina umsebenzi omningi. Kumele nje sifake futhi konke kusebenza okokuqala. Impela, singenza nolunye uguquko, kepha kumane nje kungama-tweaks akukho okunye.
Ngakho-ke, ake sibone ukuthi ungayifaka kanjani.
Ukufaka I-LMDE singaya isiza sokulanda bese wehlisa i- .iso enesisindo nxazonke 900mb, ngakho-ke ifomethi DVD. Singayishisela kwi-DVD noma singakha ngayo Unetbootin isithombe esivulekayo kusuka kwimemori ye-flash. Kuyafaneleka ukucacisa ukuthi, kusayithi lokulanda liyatholakala I-LMDE Xfce.
Lapho konke sesikulungele, siqala i-PC ngenketho yokuphakamisa ngefayela le- I-CD ROM noma nge USB futhi kufanele silayishe ideskithophu ye I-LMDE ngemizuzwana embalwa.
Sisebenzisa okufakiwe ngokuchofoza kabili kusithonjana Faka Linux Mint bese silinda ukuthi iwizadi yokufaka iphume.
Inketho yokuqala kuzoba ukukhetha ulimi. Kufanele kucaciswe ukuthi le nguqulo, noma ngabe sikhetha ifayela le- ISpanishi-isiCastilian, iwizard izosebenza ngokuphelele ngesiNgisi.
Siqhubeka nesinyathelo sesibili, esizokukhetha i-Time Zone. Kulokhu, kufanele sikhethe izwe noma isifunda esihlala kuso.
Manje sikhetha okuhlukile kwekhibhodi esiyisebenzisayo. Ngokuvamile, lokhu kulungiselelwa kufanele kube okujwayelekile ngokuya ngolimi esilukhethayo, kepha singasetha ushintsho ngesandla, njengoba kunengqondo.
Lesi sinyathelo sibaluleke kakhulu. Ukuhlukaniswa kwediski kuyinqubo ebucayi. Sizonikezela i-athikili yonke ukuze ichaze ukuthi ungahlukanisa kanjani I-GNU / Linux, kepha okwamanje ngizoyichaza kafushane inqubo.
Njengaku-Windows, lapho ukwahlukanisa kukhona C: yamafayela wohlelo, kanye D: yedatha yomsebenzisi, ku I-GNU / Linux singahlukanisa ukwahlukaniswa kwamabhanari kanye nelinye lamafayela ethu. Ngokuyinhloko ukwahlukaniswa kuzokwenziwa ngale ndlela elandelayo:
1- Ukwahlukanisa kokuqala kohlobo oluyinhloko, kunikezwa impande «/».
2- ukwahlukaniswa kwesibili okuzoba kohlobo Olwandisiwe okuzoqukatha:
Ukwahlukaniswa kohlobo Logic lwe- I-SWAP nge-RAM ephindwe kabili.
Ukuhlukaniswa kohlobo lwe-Logic ekhaya lethu "/ ikhaya" nayo yonke isikhala sediski.
Yebo, ngiyazi ukuthi lokhu kungazwakala kunzima kancane, kepha empeleni akunjalo. Noma kunjalo, njengoba silungiselela imanuwali enemininingwane kuma-partitions ku- I-GNU / Linux, bangafunda okwengeziwe ngale ndaba ngesi- lesi sixhumanisi o lokhu okunye.
Endabeni yalokhu okuthunyelwe, sithatha ukuthi usuvele uyakwazi ukwahlukanisa nokuthi lesi sinyathelo usidlulise ngaphandle kwenkinga.
Ngemuva kokuhlukanisa kufanele sibeke idatha yethu. Okokuqala igama lethu eligcwele elingakhethwa. Ngemuva kwalokho eyethu igama lomsebenzisi, ongumsebenzisi esizomsebenzisa ukufinyelela isikhathi sethu. Kamuva iphasiwedi yethu futhi ekugcineni, igama lethimba lethu.
Ngaphandle kokuthi wazi ukuthi wenzani, isinyathelo 6 okungukufaka ifayela le- I-GRUB kufanele uyishiye njengoba iza ngokuzenzakalela, ikakhulukazi uma unohlelo olungaphezu kolulodwa kukhompyutha yakho. Ngemuva kwale ngxenye, iwizard izosikhombisa isifinyezo sezenzo ezizokwenziwa uhlelo nokufakwa kuzoqala.
Lapho le nqubo isiqediwe, ehlala cishe imizuzu eyi-5 kuye kwengu-10 ngokuya ngehardware yemishini yethu I-LMDE Izosazisa ukuthi isiqedile ukufaka.
Futhi lapha inqubo yokufaka iphela. Kulula?
Esitolimende esilandelayo sizobona ukuthi singaluvuselela kanjani uhlelo lwethu nokuthi kanjani ukufaka ukukhipha amaphakheji athile esingawasebenzisa noma esingawasebenzisi. Sizophinde sikukhombise amanye amathiphu wokusebenzisa kangcono uhlelo lwethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » [Ingxenye yokuqala] i-LMDE ngokujula: Ukufaka
Ekugcineni kunesifundo esihle sokuthi ungayifaka kanjani i-LMDE; D. Ngizolindela isifundo sesibili, ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ungazifaka kanjani izinhlelo, ngivuselele, njll. Lapho sengazi ukuthi ngiya eLinux Mint!
I-PS: Ibhulogi enhle kakhulu, iyaqala futhi iyamangalisa 😛
Ngiyethemba ukushicilela i-athikili elandelayo kungekudala 😀
Idla malini le distro, okungukuthi, yiziphi izidingo zehadiweji ozidingayo, ngoba nginomngane oqale nge-Debian 6 futhi umfana ompofu wenza umsebenzi omkhulu, ngiphakamise le distro, kepha ngidinga ukwazi izidingo, njengoba ene-p4 ene-512Mb ye-ra ne-cpu ku-2.4.
Tshela umngani wakho ukuthi azame inguqulo ngeXfce. Ngiyayisebenzisa futhi iyandiza.
Ngicabanga ukuthi i-LMDE ingasetshenziswa nalawo ma-specs, kepha ungalindeli ukuthi izosebenza kahle ngokungathi ine-1Gb ye-RAM. Kodwa-ke, njengoba uCarlos esho, inguqulo ene-Xfce kumele indize iphansi .. 😀
Ngifakele udadewethu uhlobo lweMate ku-pc enama-512 ram futhi isebenza kahle kakhulu.
Ngiyabonga ngesifundo, kuhle ngathi ngama-neophyte kulolu daba, ngingajabula ukwazi okwengeziwe futhi ngingabonga kusengaphambili ukuthi uzoshicilela isifundo esilandelayo ukuze ngithole ulwazi oluthe xaxa ngale distro enhle kakhulu, siyakuhalalisela kanye ngiyabonga futhi
Okokufundisa abalandelayo sekushicilelwe vele
Umbuzo owodwa. Benginenkinga yokufaka i-LMDE selokhu ukufakwa kumile lapho ithi "Ukungeza umsebenzisi ohlelweni".
Ngabe uqinisekisile isamba se-ISO yakho? Kungenzeka ukuthi lokhu konakele;).
Ngabe uLmde kufanele ashiywe kanjani ngokuphelele eSpanishi?
i-distro enhle kakhulu, inconyiwe!
IBrazil izosebenzisana ekwakhiweni kweLibreOffice neOpenOffice
IPython yonke indawo, ngisho naku-iPhone ne-iPad !!!